ဓနတံခွန် ရေခဲစက်ရုံ ရှေ့ဝင်ပေါက်ပိတ်ဆို့မှု ခံထားရခြင်းကြောင့် ကျပ်သိန်းထောင်ချီ ဆုံးရှုံး? - Yangon Media Group
ဓနတံခွန် ရေခဲစက်ရုံ ရှေ့ဝင်ပေါက်ပိတ်ဆို့မှု ခံထားရခြင်းကြောင့် ကျပ်သိန်းထောင်ချီ ဆုံးရှုံး?
ဓနတံခွန် ရေခဲစက်ရုံ ရှေ့ဝင်ပေါက် ပိတ်ဆို့မှုခံထားရသည့်အတွက် ကျပ်သိန်း ထောင်ချီဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းနှင့် အလုပ်သမား ၄၂ဝ ကျော် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း စက်ရုံ မန်နေဂျာထံမှသိရသည်။ ယင်းသို့ ပိတ်ဆို့ခံထားရမှု ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ထံ တိုင်ကြားထားသည့်အတွက် လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဓနတံခွန် ရေခဲစက်ရုံကို ပိတ်ဆို့ခြိမ်းခြောက်သူများကို အမှုဖွင့်အရေးယူထား ကြောင်း သိရသည်။
”ဒီနေ့ထိ ပိတ်ထားတုန်းပဲ။ အမြန်ဆုံးသက်ဆိုင်ရာကနေ ဒီလူ တွေ ပိတ်ဆို့နေတာတွေကို ဖယ်ရှား ပေးစေချင်တယ်။ သူတို့သိမ်းဆည်း ခံလယ်မြေပြန်ရချင်တာ။ သူတို့က လယ်/စီကိုပဲ ဥပဒေနဲ့အညီ တင်ပြရမှာ။ လယ်/စီကလည်း စိစစ်နေဆဲကာလပါ။ လယ်/စီကပေးဆိုတဲ့ အမိန့်ချရင် ကုမ္မဏီဘက်က ပေး ဖို့အသင့်ပါပဲ။ အခုက သူတို့ လမ်းလွဲနေတယ်။ အခုစက်ရုံရဲ့ မြေ နေရာက မူလလယ်ပိုင်ရှင်အစစ်က ဦးသိန်းဌေးဆိုသူပါပဲ”ဟု မန်နေဂျာ ကိုကြည်ရွှင်က ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသတင်းစာသို့ ဇွန် ၂၄ ရက်ကပြောသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရေခဲစက် ရုံလုပ်သား ၂ဝ ကျော်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ညောင်တုန်းမြို့နယ် ငှက်ပျော ကျွန်း ခတ္တိယကျေးရွာငါးကန်များ မှ ငါးကန်လုပ်သား ၄ဝဝ ကျော်တို့သည် လုပ်ငန်းခွင်ရပ်ပြီး အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း ပဒံကျေးရွာ အနော်ရထာ လမ်းမအမှတ် (၇၃ဝ) ရှိ ဓနတံခွန် ရေခဲစက်ရုံဝင်ပေါက်ရှေ့တွင် ဇွန် ၁၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီအချိန်က လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း ပဒံ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ ၁၁ ဦးက ၁၅ ပေx ၁ဝ ပေခန့် ဝါးလုံးတဲ အခင်းမပါ မိုးကာအမိုးဖြင့် တဲထိုးပြီး ၎င်းတို့ ပိုင်ဆိုင်သော လယ်မြေများဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ လျော်ကြေး မရသဖြင့် ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စက်ရုံ ရှေ့ တဲထိုးဆန္ဒပြနေသူတွေထဲမှ ဒေါ်စန်းရွှေဆိုသူက ”ကျွန်မတို့ က လယ်သိမ်းခံထားရလို့ မြေပြန်လိုချင်တာ။ မြေပြန်မရရင်လည်း နစ်နာကြေးရချင်တာ။ စက်ရုံကို လူဝင်လူထွက်ပေါက် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ သိမ်းဆည်းခံမြေက ကျွန်မ အဖေ ဦးမြဟန်ရဲ့မြေပါ။ မြေလွတ်ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲဒါ ရချင်တာ။ မြေပြန်မရရင် နစ်နာကြေးရချင်တယ်။ မနေ့ညနေက ထွေ/အုပ်ရုံး မှာ ကျွန်မတို့ကို ခေါ်ပြောတယ်။မနက်ဖြန် နံနက် ၁ဝနာရီ ဖယ် ပေးပါတဲ့။ ဖယ်မပေးရင် အဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ လာရှင်းမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ခရိုင်မှူးလည်းပါပါတယ်။ အဖွဲ့စုံ နဲ့ပြောတာပါ။ ကျွန်မတို့ကတော့ ဖယ်မပေးနိုင်ဘူး။ အခုလည်း မ ဖယ်ဘူး။ အခုချိန်ထိတော့ ဘယ်သူမှ တဲလာဖျက်တာ မတွေ့သေးဘူး။ နစ်နာကြေး ဘယ်လိုပေးမလဲ သိချင်တာ။ စက်ရုံဘက်က ကျွန်မတို့ကို အမှုဖွင့်ထားတယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇွန် ၂၄ ရက်က ပြောသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်အတွက် နစ်နာသူ ဓနတံခွန်ရေခဲစက်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ဥမ္မာမြင့်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် လှိုင်သာယာ ၁၁ ရပ်ကွက် ခရေလမ်းနေသူက သောင်ကြီး နယ်မြေရဲစခန်းသို့ ဇွန် ၂ဝ ရက်က တိုင်ကြားထားကြောင်းသိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး အောင်မြတ်စိုးက ”ဒီကိစ္စကို အမှု ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဇွန် ၂၃ ရက်ညနေပိုင်းက ထွေ/အုပ်ကနေ ဦးစီးပြီးတော့ ထွေအုပ်ရုံးမှာ နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ဖြေရှင်းပေးနေပါတယ်”ဟု ဇွန် ၂၃ရက် ညနေပိုင်းက ဒီမိုကရေစီ တူဒေးသတင်းစာသို့ ပြောသည်။ ယခုအခါ စက်ရုံဝင်ပေါက် ပိတ်ဆို့သူများကို လှိုင်သာယာမြို့ နယ် သောင်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်း မှ (ပ) ၆၆၂/ ၂ဝ၁၈ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၄၁/၁၁၄/၅ဝ၆ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သောင်းကြီးနယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။
Mission; Impossible ရုပ်ရှင်များ ဆက်လက် ရိုက်ကူးမည့် တွမ်ခရုစ်
မီတာခ မတက်သရွေ့ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီး မရနိုင် ဟုဆို
အကယ်ဒမီနည်းပြ အဖြစ် ချဲလ်ဆီးသို့ ဂျိုးကိုးလ်ပြန်လာမည်
သင်္ကြန် မတိုင်မီကာလ ကားလက်မှတ်ခ သတ်မှတ်နှုန်းထက် ပိုပါက YRTA သို့ တိုင်ကြားနိုင်၊ ယာဉ်လိုင်းအချ
ချင်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ ခရိုင်မြို့များ အပါအဝင် မြို့ ၁၅ မြို့ကို အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲ၍ မြို့ပြ?
ရေနံချောင်းမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် မိသားစု ပင်စင်လာထုတ်သူ အဘွားအိုတစ်ဦး လဲကျသေဆံ